နိုင်ငံပေါင်း(16) နိုင်ငံ ရတနာသုံးပါးနဲ့ တွေ့ ကြပြီ… – ရှအေလငျး
ရတနာ သုံးပါးနဲ့ တွေ့ ကြပြီ
နိုင်ငံပေါင်း(16) နိုင်ငံစုပေါင်းပြီး ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲ နှင့် ငွေပဒေသာပင် ဆပ်ကပ်လှူ ဒါန်းပွဲကြီး
1 . အမေရိကန်
2 . အိန္ဒိယ
3 . နီပေါ
4 . ပိုလန်
5 . ရုရှား
6 . တောင်ကိုးရီးယား
5 . ဥဇဘကစ္စတန်
7 . အင်ဒိုနီးရှား
8 . မလေးရှား
9 . စီးရီးယား
10 . ဟန်ဂေရီ
11 . မော်လဂို
12 . ဘင်္ဂလာဒေ့စ်
13 . ဘူဂါရီးယား
14 . တရုတ်
15 . ထိုင်း
16 . သီရိလင်္ကာ
မြန်မာ နှင့် သံဃာ
မြန်မာပြည်က သံဃာတွေ လခမယူပဲ ကြိုးစားလိုက်ကြတာ စာတွေ ကြိုးစားသင်ပေးကြတယ်။
တရားတွေ ပြကြတယ်။မေးချင်တာ မေးလို့ရတယ်။ဘာမှ မယူဘူး အံ့သြတယ်။(ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီး)
မြန်မာဘုန်းကြီးတွေ ကလေးဘဝထဲက ပါဠိစာပေ ကျွမ်းကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အသက်ကြီးမှသက္ကတ သင်ရတာ။(အိန္ဒိယပါမောက္ခ သက္ကတပညာရှင်)
မြန်မာနိုင်ငံရှိလို့ပိဋကတ်စာပေခြေခြေမြစ်မြစ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သင်ခွင့်ရတာငါတို့ ကံကောင်းတယ်။(ထေရဝါဒ ၅ နိုင်ငံ သံဃာတော်များ)
မြန်မာပြည်မှာတရားထိုင်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။အတွင်းကျကျ နားလည်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် နှစ်တိုင်း တရားလာအားထုတ်တာ။(အင်္ဂလန် ဒကာတဦး)
မြန်မာပြည်မှာ ဘုရားရှိတယ်၊တရားရှိတယ်၊တရားပြမဲ့ သံဃာရှိတယ် စိတ်အေးချမ်းလို့ မြန်မာပြည်မှာ အမြဲနေတော့တာ။(အမေရိကန် ဒကာတဦး)
မြန်မာပြည် ရောက်ဖူးချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လယ်တီဆရာတော်ကြီးတရားအားထုတ်တဲ့နေရာကို ရောက်ဖူးချင်လို့။
လယ်တီဆရာတော်ရဲ့ တရားတွေကြောင့် ဘဝဟာ ငြိမ်းချမ်းသွားတာ။(အိန္ဒိယ ဦးဂိုအင်ဂါ တပည့်များ)
မြန်မာပြည် မရောက်ဖူးဘူး။ဖားအောက်တော့ ကြားဖူးတယ်။ငါတို့နိုင်ငံသားတွေ သွားကြတယ်။
ငါလည်း မြန်မာပြည်ရောက်ရင်ဖားအောက်ရိပ်သာ သွားပြီး တရားအားထုတ်ချင်တယ်။(တောင်ကိုးရီးယားကျောင်းသူ)
နိုငျငံပေါငျး(16) နိုငျငံစုပေါငျးပွီး ဝိပဿနာတရားစခနျးပှဲ နှငျ့ ငှပေဒသောပငျ ဆပျကပျလှူ ဒါနျးပှဲကွီး
1 . အမရေိကနျ
2 . အိန်ဒိယ
3 . နီပေါ
4 . ပိုလနျ
5 . ရုရှား
6 . တောငျကိုးရီးယား
5 . ဥဇဘကစ်စတနျ
7 . အငျဒိုနီးရှား
8 . မလေးရှား
10 . ဟနျဂရေီ
11 . မျောလဂို
12 . ဘင်ျဂလာဒစျေ့
14 . တရုတျ
15 . ထိုငျး
16 . သီရိလင်ျကာ
မွနျမာ နှငျ့ သံဃာ
မွနျမာပွညျက သံဃာတှေ လခမယူပဲ ကွိုးစားလိုကျကွတာ စာတှေ ကွိုးစားသငျပေးကွတယျ။
တရားတှေ ပွကွတယျ။မေးခငျြတာ မေးလို့ရတယျ။ဘာမှ မယူဘူး အံ့သွတယျ။(ဗီယကျနမျဘုနျးကွီး)
မွနျမာဘုနျးကွီးတှေ ကလေးဘဝထဲက ပါဠိစာပေ ကြှမျးကွတယျ။
ကြှနျတျောတို့က အသကျကွီးမှသက်ကတ သငျရတာ။(အိန်ဒိယပါမောက်ခ သက်ကတပညာရှငျ)
မွနျမာနိုငျငံရှိလို့ပိဋကတျစာပခွေခွေမွေဈမွဈ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ သငျခှငျ့ရတာငါတို့ ကံကောငျးတယျ။(ထရေဝါဒ ၅ နိုငျငံ သံဃာတျောမြား)
မွနျမာပွညျမှာတရားထိုငျရတာ အဆငျပွတေယျ။အတှငျးကကြ နားလညျတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ နှဈတိုငျး တရားလာအားထုတျတာ။(အင်ျဂလနျ ဒကာတဦး)
မွနျမာပွညျမှာ ဘုရားရှိတယျ၊တရားရှိတယျ၊တရားပွမဲ့ သံဃာရှိတယျ စိတျအေးခမျြးလို့ မွနျမာပွညျမှာ အမွဲနတေော့တာ။(အမရေိကနျ ဒကာတဦး)
မွနျမာပွညျ ရောကျဖူးခငျြတယျ၊ ဘာဖွဈလို့ဆိုတော့လယျတီဆရာတျောကွီးတရားအားထုတျတဲ့နရောကို ရောကျဖူးခငျြလို့။
လယျတီဆရာတျောရဲ့ တရားတှကွေောငျ့ ဘဝဟာ ငွိမျးခမျြးသှားတာ။(အိန်ဒိယ ဦးဂိုအငျဂါ တပညျ့မြား)
မွနျမာပွညျ မရောကျဖူးဘူး။ဖားအောကျတော့ ကွားဖူးတယျ။ငါတို့နိုငျငံသားတှေ သှားကွတယျ။
ငါလညျး မွနျမာပွညျရောကျရငျဖားအောကျရိပျသာ သှားပွီး တရားအားထုတျခငျြတယျ။(တောငျကိုးရီးယားကြောငျးသူ)
အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်က ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးနေတဲ့...
သင်္ဘောသားဘဝဆိုတာ လွယ်လားမလွယ်လားတော့ မသိဘူး ဒီလို ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်း...